Somali - Goodwill-Easter Seals Minnesota
Services for Somali-speaking people
Howlaheena Shaqo Raadinta
Haddii aad dhibaato ku qabto helitaanka ama heysashada shaqooyinka, waxaanu bixinaa howlaha shaqo raadinta oo kala duwan oo kaa caawin kara sidii aad shaqo ku heli lahayd. Waxaanu kaloo bixinaa tababaro iyo howlo shaqo raadin ah si aanu kaga caawino inaad hesho shaqo iyo markaa ka dibna waxaanu bixinaa howlaha caawinaada ee ku sahlaya sidii aad ku sii haysan lahayd shaqadaada oo aad ugu hormari lahayd jagada aad hayso mustaqbalka,
Howlaha kale ee aanu qabano?
Qeybta Deyminta Qalabka Caafimaadka waxay bixisaa sii deyminta isticmaalka qalabka caafimaadka,oo bilaash ah bixisaana qalab nadiif ah oo ku meel gaar ah oo dib looga soo shaqeeyay oo ay siisaa dadka u baahan. Howshaan waxaa laga bixiya meelo ku kala yaala magaalooyinka:Willmar,St. Cloud,Rochester andSt. Paul.Riix xarafka ka hooseeya magaalada si aad ku furto khariirada goobtaas deyminta qalabka caafimaadka.
Adigu ma u qalanta howlaha aanu qabano?
U qalmida howlaha aanu qabnaa wey kala duwan yihiin howl walba. Habka ugu fiican ee lagu ogaado inaad u qalantana waa inaad la hadasho mid ka mid ah shaqaalaheena.
Halkee baad degan tahay?
Howlaheena waxaa laga bixiyaa meelo fara badan ooMinnesotaoo dhana. Fadlan Halkaan Riix si aad ku hesho goobta shaqada.
Wax ka iibsashada dukaanada Goodwill
Wax ka iibso Goodwill si ay lacagtu kugu dhaqaalowdo! Tusaale ahaan Jiinis cusub dukaanada kale waxa uu ka joogaa $25, $30, $50 ama xitaa ka badan. Goodwill na, jiiniska ugu qaalisani waxa aanu gadnaa $10. waxaa intaas ku dheer, mararka qaarkood waxaanu hoos u dhignaa usicirkeena si aanu meel ugu helno alaabta cusb ee aanu keenayno. Waxaanu sidoo kale ku haynaa dharka caruurta oo qiime iyo tayo leh oo sicirkiisuna yahay mid maquul ah, qalabka guryaha, iyo alaabo kaloo intaas dheer.Soo booqo bogga ay ku yaaliin dukaanadeenu si aad ku hesho dukaanka ugu dhow ee degaankaada ku yaal.
Si aad ku soo codsato howlaha aanu qabano, fadlan waxaad kala soo xariirta: